လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ နေထိုင်နေတဲ့ မိသားစုအခြေအနေကို ချပြလာတဲ့မင်းမော်ကွန်း
အကယ်ဒမီမင်းမော်ကွန်းကတော့ အနုပညာနယ်ပယ်မှာ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့တာကြောင့်အရေးတော်ပုံမှာလည်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပြန်လည်ရပ်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင် မင်းမော်ကွန်းကလွတ်မြောက်နယ်မြေကိုရောက်ရှိနေပြီး PDF ရဲဘော်တွေနဲ့အတူ တစ်သားတည်းနေထိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော်ကွန်းရဲ့ စွန့်လွှတ်စွန့်စားရဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း ပြည်သူတွေက လေးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မင်းမော်ကွန်းနဲ့အတူ သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်း လွတ်မြောက်နယ်မြေကို လိုက်ပါလာပြီး အေးအတူပူအမျှနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော်ကွန်းရဲ့ ဇနီးကလည်း ပါရမီဖြည့်ဖက်ကောင်းပီသစွာနဲ့ ...
ပြည်သူနဲ့တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့တဲ့ မင်းသားချော ပိုင်တံခွန်အတွက် ဂုဏ်ပြုသီချင်းသီဆိုပေးခဲ့တဲ့ ထိုင်းလူမျိုး
နိုင်ငံကျော် မော်ဒယ်၊ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ပိုင်တံခွန်က ရှည်လျားတဲ့ အရပ်အမောင်းနဲ့ ယောကျာ်းဆန်တဲ့ မျက်နှာကြောင့် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းစွဲမင်းသားလေးတစ်ဦး ဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်က မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ ထိုင်း ဗီယက်နမ် တရုတ် စတဲ့နိုင်ငံတွေ အပြင် ...
ဘဝရည်မှန်းချက် ကြီးမားခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ ခင်သစ်နှင်းဟာ ကလေးအထူးကု ဆရာဝန် ဖြစ်လုလု နှစ်လခန့် အလိုမှာ….
ဘဝ ရည်မှန်းချက် ကြီးမားခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ ခင်သစ်နှင်းဟာ ကလေးအထူးကု ဆရာဝန် ဖြစ်လုလု နှစ်လခန့် အလိုမှာ တခြား ဆရာဝန် မတယောက်က မျက်နှာကို အက်စစ်နဲ့ ပက်တာခံလိုက်ရပြီး အမြင် အာရုံ ကွယ်ပျောက် ရုံမက ...
အောင်ပွဲတွေနဲ့အတူ အိမ်ပြန်ချင်တာကြောင့် ပြည်သူတွေကို တောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ မေတ္တာရပ်ခံလာတဲ့ ထားထက်ထက်
နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပါဝင်နေတဲ့ ထားထက်ထက်ကတော့ သူမလုပ်နိုင်တဲ့ ဝန်ကိုထမ်းပြီး တတ်နိုင်သလောက် တာဝန်ကျေပွန်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ထားထက်ထက်က ဆန္ဒပြပွဲတွေစတင်စဉ်ကာလကတည်းက ပြည်သူတွေနဲ့အတူ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုချိန်မှာတော့ ထားထက်ထက်က လွတ်မြောက်နယ်မြေတစ်နေရာကို ...
ရာသက်ပန် သီလရှင် ဝတ်သွားတဲ့ အဆိုတော် မေသက်ထားဆွေ
မြန်မာသံ အဆိုတော် မေသက်ထားဆွေဟာ သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်အဖြစ် ရာသက်ပန် ဝင်ရောက်သွားကြောင်း ဆရာတော် အရှင်သုဘောဂ (ဓမ္မာစရိယ) က မိန့်ကြားထားပါတယ်။ “ဆရာလေး သောမာထေရီ/ မေသက်ထားဆွေ၊ ဆရာလေး ဘယ်နှရက် ဝတ်မှာလဲ။ ရာသက်ပန်ပါဘုရား။ ဆရာလေး ...
ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အဆိုတော်ပိုပို ထောင်ထဲတွင် စိတ်ကျန်းမာရေး အခြေနေမကောင်းဟုသိရ
အဆိုတော် ပိုပိုဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် စစ်အာဏာသိမ်းပြီး က တည်းက စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ လမ်းပေါ်ထွက်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ CDM လှုံ့ဆော်မှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့သလို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ဖော်ပြတဲ့ သပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီက နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ...
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ပိုပိုရဲ့ ဖေ့ဘုတ်ကနေ ပို့စ်တွေ တက်လာခဲ့
ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ (၁၅) ရက်နေ့ ညနေ (၃) နာရီခန့်က ပုဒ်မ (၅၀၅) (က) နဲ့ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ပိုပိုဟာ လက်ရှိမှာတော့ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာရှိနေပြီး ဖမ်းဆီးခံရစဉ်က သိမ်းယူခံထားရတဲ့ သက်သေခံပစ္စည်းတွေထဲမှာ သူမရဲ့ဖုန်းလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ကနေ ...
မျက်စိတစ်ဖက်ပျက်စီးသွားခဲ့သူရဲ့ မိသားစုလေးကိုလည်း ကူညီပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲအတွင်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျဆုံးသွားခဲ့ရသူတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေအပြင် မျက်စိတစ်ဖက်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသူရဲ့ မိသားစုကိုပါ သရုပ်ဆောင် ခန့်စည်သူက ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးသွားသူတွေရဲ့ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုဝင်တွေအတွက် သရုပ်ဆောင် ခန့်စည်သူက ဆန်၊ ...
ဒါရိုက်တာ၊ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုပေါက်ကတော့ သားနှစ်ယောက်ဖခင် အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ကိုပေါက်က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်ရေးနဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုတို့မှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့် ပုဒ်မ ၅၀၅-က နဲ့ အမှုဖွင့် ဝရမ်းထုတ်ခံထားရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်တဲ့ဘက်ကနေရပ်တည်ရင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ...
Page 1 of 335 12… 335 Next